Ngaba abathengisi bangaliXhasa njani eli thuba kwi-Ecommerce yeHlabathi ngethuba leKrisimesi? | Martech Zone
Ngeemarike zehlabathi jikelele ze-ecommerce enqamlezayo ngoku enexabiso £ 153bn ($ 230bn) ngo-2014, kwaye kwaxelwa kwangaphambili ukuba inyuke yaya kuthi ga kwi-666bn ($ 1 trillion) ngo-2020, ithuba leshishini labathengisi base-UK alizange libe likhulu. Abathengi bamanye amazwe baya bekhetha ukuthenga ezivenkileni kumakhaya abo kwaye oku kunomdla ngakumbi ngexesha leholide, kuba kuthintela izihlwele ezikhulu kunye noxinzelelo lokuthenga kwiKrisimesi.
Uphando oluvela kwi Isalathiso sedijithali seAdobe icebisa ukuba ixesha leholide kulo nyaka limele i-20% yenkcitho kwi-Intanethi kwihlabathi liphela. NgeKrisimesi enikezela isilayidi esikhulu sengeniso kubathengisi, iimveliso ezinamabhongo kufuneka ziqiniseke ukuba baneenkqubo ezifanelekileyo ezikhoyo zokufumana ithuba kwi-Intanethi- hayi ekhaya kuphela, kodwa phesheya.
I-ecommerce yamazwe aphesheya ithembisa okuninzi kwingeniso enokubakho kubathengisi njengoko inika iimveliso amandla angazange abonwe ngaphambili okukhulisa ngokukhawuleza amashishini kumazwe aphesheya, ebenza bakwazi ukubonelela ngeempahla zabo kubathengi kwiimarike zangaphandle, ngaphandle kwesidingo sobukho ngokwasemzimbeni. Ukuzibophelela ekunikezeleni ngamava okuthenga ngaphandle komthungo iya kuba kukuqhuba kwentengiso yehlabathi kwi-Intanethi kule Krisimesi.
Ingxaki kukuba, abathengisi abaninzi bahlala bezabalaza ukuba bathelekise ukuthengisa okumangalisayo kwilizwe labo kwiimarike zamanye amazwe. Oku kungenxa yemiqobo eyahlukeneyo yezithintelo kwi-ecommerce ezinje ngamaxabiso aphezulu okuthumela ngenqanawe, imisebenzi yokungenisa engaziwayo, imbuyekezo engafanelekanga, kunye nobunzima bokuxhasa iimali zasekhaya kunye neendlela zokuhlawula. Le micimbi ithatha ubunzima obutsha kwimeko-bume yokhuphiswano lweKrisimesi apho iinkonzo zabathengi ezingalunganga ziya kuthumela abathengi kwenye indawo.
Umgaqo ophambili kurhwebo lwamanye amazwe kukuba, ukuze baphumelele, abathengi kufuneka bonwabele amava amahle okuthenga nokuba bakweyiphi na indawo. Abathengisi akufuneki babaphathe abathengi abanqamlezayo njengeklasi yesibini. Ukugcina abathengi bamanye amazwe bebandakanyekile, abathengisi kufuneka baqiniseke ukuba iminikelo yabo yommandla ilula, ibekwe ekuhlaleni kwaye iyabonakala.
Ezi zinto zine ziqwalaselwayo ziyimfuneko:
Yiba neendlela ezininzi zokuhambisa ngenqanaba elifanelekileyo. Kuqhagamshelwe koku, ukubonelela ngenkqubo elula kunye neyobungozi engabalulekanga kubalulekile kubo bonke abathengi njengoko ibabeka ngokuzithemba ukuthenga kwi-Intanethi nawe.
Nika imali yendawo; Kukho izinto ezimbalwa ngakumbi ekubekeni abathengi be-Intanethi ngaphandle kwesidingo sokubala iindleko ngemali yabo ngelixa ukhangela, ungasathethi ke ngokungaqiniseki kwenqanaba lotshintshiselwano.
Soloko ujonge ukubeka ingqondo yomthengi ngokukhululeka. Phepha nakuphi na ukumangaliswa okunokubakho kubathengi (umz. Iirhafu zesiko kunye nemirhumo yokuphatha evela kubathwali) ngokuba phambili kwezi ndleko.
Kwiimeko ezininzi, kunqande ukuguqulela umxholo wewebhusayithi yakho okanye ukwakha iisayithi zasekhaya. Le misebenzi ifuna utyalomali oluphezulu kwaye ihlala ivelisa imbuyekezo ephantsi, ke ngoko, yima nakweyiphi na inyathelo de uzibonakalise ngokwakho ngaphakathi kwintengiso.
Amabhanti akakwazi ukungahoyi ithuba lokuwela i-ecommerce ngeli xesha leKrisimesi. Ukufezekisa oku akuthethi ukuba kufuna ixesha elininzi kunye notyalo-mali kwindlu nokuba; abathengisi banokufumana iqabane lehlabathi ukuba liphucule iinkonzo kwiimfuno zabo kwaye bahlangabezane nokulindelwe kwintengiso yamanye amazwe, okwenza i-ROI yokuhamba okuhle kwihlabathi
Abalingani beTekhnoloji bathanda Ehlabathini-e inokuxhasa abathengisi ekunikezeleni ngamava e-ecommerce aphesheya kwaye inike abathengi inqanaba lenkonzo elibalulekileyo kwintengiso yokhuphiswano. Ngaphandle kwesiqinisekiso samava asekhaya, ixesha elichanekileyo lokuhambisa okanye ukuchaneka okujikeleze indleko zentengiso, abathengisi baya kuthi bangafumani kwaye babone abathengi babo belahla ukuthenga okanye ukuya kwindawo yomntu okhuphisana naye kwimicimbi yokucofa nje- hayi umngcipheko ofuna ukuthatha nawo abathengi bakho kule Krismesi!
tags: Krisimesijikelele-eiholideukuthunyelwa kwelinye ilizwekumazwe ngamazweImali yendawoIvenkileamazinga yokuthumelatranslationInguqulelo kwiwebhusayithi
UNir Debbi ngumseki-ntsebenziswano kunye neNtloko yeNtengiso kunye neNtengiso e Ehlabathini-e. UNir uneminyaka engaphezu kwe-10 yamava kucwangciso lobuchule kunye nophuhliso lweshishini kumacandelo obugcisa obuphezulu kunye nezemali. Phambi kokusekwa kwe-Global-e, usebenze njenge-SVP, iNtloko yeQhinga kunye ne-BizDev kwi-Bank Hapoalim, kulandela ixesha lokuba yiNtloko yeQhinga loRhwebo ngebhanki. Ukwanayo ne-MBA kunye neB.Sc. kwi-Economics, bobabini abasuka kwiYunivesithi yaseTel-Aviv.